गफ ! .....: July 2012
पुस्तक गफ : 'क्यासल रककी अप्सरा'सँग म
सुन्दर जोशीका निक्कै कथाहरु मैले खसखसमा पढिसकेको छु । खसखसमै उनको जादुमय कथाकारिताको टुनामा बाँधिइसकेको पनि छु । फेरिपनि कथाकार सुन्दर जोशीको कथाकृति चाँडै निस्कँदैछ भन्ने जानकारी फेसबुकले दिएको दिन फेसबुकको खुट्टा भए म टुसुक्कै ढोगीदिन्थें भनेजत्तिकै हर्ष भएको थियो । यो जानकारी मैले कथाकृतिको नाम के रहन्छ र कृतिको आवरण कस्तो हुन्छ भन्ने समेत एकसाथ पाएको थिएँ ।
'क्यासल रककी अप्सरा' नाम जुरेको कथाकृतिको आवरण चित्र फेरि मेरा मनपरेका चित्रकार तथा 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'(हालै प्रकाशित उपन्यास)का लेखक खगेन्द्र पन्धाक लिम्बूले बनाएका रहेछन् । आवरणकलाको हिसाबले संग्रह स्वस्थ्य देखिएकै छ तरपनि मलाई आवरण चित्रमा भएको रकसँगै अस्पस्ट क्यासलको केहि हिस्सा पनि जोडिएको जस्तो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो । त्यसो त आवरणमा भएको रक रकनै हो कि बोल्डर(Boulder)हो? भन्ने पनि लागेको छ ।
कथाकृति बजारमा आइसक्नु अगाडिनै मैले 'क्यासल रककी अप्सरा'लाई नेपालबाट मगाउने किताबहरुको लिष्टमा चढाइसकेको थिएँ । तर मेरो सौभाग्य एकदिन फेसबुकले कथाकार सुन्दर जोशीको म्यासेज ल्यायो । म्यासेजमा 'क्यासल रककी अप्सरा' मेरो निम्ती आउनु पर्दा कहाँ आउनुपर्ने हो? ठेगाना सोधिएको थियो । (यहाँ फेरि पनि एकपटक सुन्दर दाइलाई हार्दिक धन्यवाद!) यसरी कृतिकारहरुबाटै कृतिहरु सौगात प्राप्त गर्ने थोरैजसो मात्र अवसर पाएको मलाई यो ठुलो खुशीको क्षण थियो । सहर्ष, सधन्यवाद मैले तुरुन्तै आफ्नो ठेगाना लेखिपठाएँ र यता नेपालबाट मगाउने किताबहरुको लिष्टबाट 'क्यासल रककी अप्सरा' झिकें । शट्टामा अर्को एउटा किताब थप्न पाउने खुशी पनि थपियो ।
मेरो दैलोसम्म अप्सरा खुशी लिएर आउन हुलाक सेवालाई धेरैदिन लागेन । सम्भवत तेस्रो वा चौथो दिनमै 'क्यासल रककी अप्सरा' हात परिन् । संग्रहभित्र के के कथाहरु होलान् त? यहि थियो मेरो उत्पात कौतुहल । तसर्थ हत्तपत्त कथाक्रम हेरें । संख्यामा ११ वटा तर शिर्षकमा ७ वटा कथाहरु रहेछन् । शिर्षक कथा पढिहाल्ने ईच्छाले तुरुन्तै पेज १५९ मा गएँ र पढ्न थालें ।
दुई भागमा रहेको शिर्षक कथाको पहिलो भाग पढ्दै जाँदा पहिले पनि पढेको हो भन्ने थाहा पाउँदै गएजस्तो हुँदैथियो । लाग्यो पक्का खसखसमै पढेको हुनुपर्छ । शिर्षक कथाका दुबै भागहरु पढिसकेपछि भने यो संग्रह पढ्नलाई बिसाउने पर्ने सोचेको थिएँ मैले । किनभने म अर्कै पढ्दै गरेको किताबको पनि मध्यभागतिर पुगेको थिएँ । पढ्दै गरेको किताब सकेर मात्र पुन 'क्यासल रककी अप्सरा' समाउने विचार थियो मनमा । तर भूमिकाहरु र लेखकका कुरा चैं पढिहालौं न त भने भयो र मञ्जुल र वासु श्रेष्ठको भूमिका खरर सिध्याइहालें । वासु श्रेष्ठको भूमिकामा '..यस संग्रहमा समाविष्ट 'क्यासल रककी अप्सरा' बाहेक अन्य कथाहरु खसखस डटकममा प्रकाशन भैसकेका छन्..' भन्ने पढेपछि फेरि मैले 'क्यासल रककी अप्सरा'को पहिलो भाग कहाँ पढें त? भन्ने खुल्दुली उठ्न थाल्यो । कोलोराडोको पृष्ठभूमी बनाएर लेखिएको 'क्यासल रककी अप्सरा' पढ्दा परिचित स्थानहरुको वर्णन आएर कथाले ममा आत्मियताको अनुभुति उमारीरहेको थियो । कथामा वर्णित स्थान र दृश्यहरु मैले कथामै वर्णन गरिएझैं देखेको हुँ कि जस्तो समेत लाग्दैथियो । अमेरिका आएर म आफैं पनि पहिलोचोटी कोलोराडोमै बसेको थिएँ र झण्डै तीनवर्षको कोलोराडो बसाईमा कथामा वर्णित स्थानहरु बारे लगभग ज्ञात थिएँ । अझ मीठो संयोग त कोलोराडोमा मेरो पहिलो बसाई भएको अपार्टमेण्टको नाम समेत 'क्यासल अपार्टमेण्ट' थियो । कथाप्रति एकदम नै आत्मियपना उमार्नु त पक्कै यि नै कारणहरु थिए । कतै यि नै कारणहरुको कारणले गर्दा मलाई यो कथा पहिले कतै पढेको जस्तो लागेको त हैन भन्ने जस्तो पनि लाग्दैथियो । तर केहिपछि वासु श्रेष्ठ दाइसँग फोनमा कुराकानी हुँदा थाहा भयो 'क्यासल रककी अप्सरा'को पहिलो भाग पनि खसखसमा प्रकाशित भैसकेको रहेछ ।
मैले पढ्दै गरेको(आधा पुर्याएको) किताब डा गोविन्दराज भट्टराईको 'सुकरातका पाईला' थियो । अघिल्लो पटक 'सुकरातको डायरी' मगाउँदा भूलवश आएको 'सुकरातको पाईला' पनि मैले पढेको थिएन र पढ्दैथिएँ । डा भट्टराईको रोचक शैलीमा, तत्कालिन अवस्थाको देशको सजीव चित्रण भएको उपन्यास भएपनि एकोहोरो निराशापूर्ण कथानकले म दिक्दारिएको थिएँ । त्यसैले सोचें निराशाजनक कथानकले दिक्दारिएको बेला उत्साह र उमँग भर्ने उल्लासमय कथाहरु भएको जोशीको क्याशल रककी अप्सरा "एब्सोलुट्ली अ गूड ब्रेक विद रिडिङ" हुनेछ । त्यसैले 'सुकरातका पाइला'लाई ब्रेक नै दिने निधो गरें ।
उत्साह र उमँग भर्ने उल्लासमय कथाहरु भएको जोशीको क्याशल रककी अप्सरा भन्दैमा मैले 'क्यासल रककी अप्सरा'भित्र केवल खुशीयाली मात्र लेखिएको छ । केवल उल्लास मात्र बयान छ । कथाकारले संग्रहमा दुख पीडाका नाम निशानै कोरेका छैनन् भन्न खोजेको होइन फेरि । उनले दुख, पीडा, निराशाहरु पनि लेखेका छन् त्यसो त । 'कार्लोस मेरो दर्पणछाया'मा पाठकलाई रुवाउने वा गहीरो चिन्तामा डुबाउने गरि एउटा जीवनको हार लेखेका छन् । 'टर्मिनल थ्री'मा देशको पीडासँगै विश्व व्याथा उतारेका छन् । 'बाह्र लाखको कविता'मा अमेरिकन सपना फुटेर निस्किएको ह्रदय छेड्ने आवाज कोरेका छन् । शिर्षक कथामै पनि 'याङ्की' र कहिल्यै घाम नहेर्ने कसम खाएकि 'वृद्धा आनी' जस्ता पात्रहरुलाई ल्याएर सामान्य जीवनले सहन गर्न नसक्ने प्रकारका दुखका सगर छोएका छन् । तर यि सबै पीडा, ब्याथा, निराशा, हारहरुका बावजुध पनि कथाकारले सबै कथाहरुलाई ठ्याक्क जीवन जस्तो बनाएका छन् । हो, जोशीका कथाहरु ठ्याक्कै जीवन जस्तै लागे मलाई । जसरी जीवनमा अनेक कष्ट र पीडाहरु झेल्दाझेल्दै पनि हामी हर्दम हाँस्ने प्रयत्न गर्दछौं त्यसैगरी कथाकारले यस संग्रहका हरेक पात्रहरुलाई पहाड जत्रो दुखपनि आफ्नो पैंतीस, छत्तिस ईन्चको छातीभित्र लुकाएर हाँस्न र अरुलाई हँसाउँन सक्ने बनाएका छन् । म आफैं पनि कथा लेखिटोपल्ने भएकोले र आफ्ना प्रायस कथाहरुमा थुप्रै निराशाहरु लेखिसकेको हुनाले मलाई सुन्दर जोशीका कथामा भेटिएका जीवन प्रति आशावादि, हँसमुख र ईनर्जेटिक(उर्जाशील) पात्रहरु भेट्दा ईर्ष्या भएर आयो कि किन मेरा कथामा यस्ता रमाईला पात्रहरु आएनन्?
संग्रहभित्रका सबैजसो कथाहरु खसखस डटकमको वेबपेजमा पढिसकेको भएपनि कथाकार जोशीको मनमोहक शैलीले गर्दा संग्रहका हरेक कथाहरु पढ्दा मलाई पहिलोपल्ट पढिरहेछु जत्तिकै ताजापना, रोमान्चकारी र पठनीय लागे । पुस्तकाकारमा कृति पढ्नु र त्यहिकुरा वेबपेज खोलेर कम्प्युटरको स्क्रिनमा पढ्नुमा कत्रो(आकाश पातालको) अन्तर हुनेरहेछ भन्ने पनि महसुस गरें मैले ।
अन्त्यमा, कथाकार सुन्दर जोशीको कथा संग्रह 'क्यासल रककी अप्सरा' नेपाली कथा साहित्यलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । र यो संग्रह कथा साहित्यका अनुरागीहरुलाई निसंदेह पठनीय र संग्रहणीय कृति पनि हो । म एक पाठकको हैसियतले यस कृति र कृतिकारलाई यस कृतिको सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । र एक भाइको हैसियतले पनि कथाकार दाइ सुन्दर जोशीलाई लेखन यात्रामा निरन्तरता र सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।
Keep Rocking Sundar Dai,
Posted by दीपक जडित at 5:08 AM No comments: Links to this post
लघुकथा : ढङ्ग
घरमा दुईजना पाहुना आएका थिए । एउटा आफ्नै सालोकेटो अर्को उसको साथी । सानो आयस्ताले काठ्माण्डौको उकुशमुकुश परिवेशमा धरहरा भन्दा अग्लिएको महँगी झेलेर बसेको बेला पाहुनापासालाई सत्कार हैन कोठामै नहुलि दुत्कार गर्न पाए हाइसञ्चो हुँदो हो म जस्ता धेरैलाई ।
एकाविहानै श्रीमतीले भनिन्, 'भाइहरु अहिले नै जाने भन्दैछन् । लौ न अलिकति कुखुराको मासु किनेर ल्याउनुस् । खाना खुवाएर पठाउँछु ।'
'कुखुराको मासु नभए चैं खाना बन्दैन?' सालोकेटो र उसको साथी बाहिरपट्टि हातमुख धुन लागेका थिए । उनिहरुले सुन्दैनन् भन्नेमा ढुक्क हुनाले म झडङ्गिएँ, 'चिया खुवाएर पठाए भै'गो नि ।'
'गाउँमै आवारागर्दी गरेर हिंड्ने सालोकेटो निक्कै भएथ्यो नझुल्किएको । पहिले पहिले आउँदा अनेक बहाना बनाएर दिदीसँग पैसा धुतेर जान्थ्यो । मलाई सालोकेटो देख्दै एलर्जी हुन्छ । कहाँबाट उस्तै साथी पनि लिएर आएछ? हेर्दै गुण्डाकेटाहरु जस्ता । साथी चैं पनि उहि ड्याङको होला नि?' घृणाभावले म गम्दैथिएँ ।
'तपाईं त कस्तो मान्छे हो? मेरो भाइहरु हुन् ।' अँध्यारो रुन्चे मुख लाइन् श्रीमतीले ।
म बाहिर निस्किएँ । सालोकेटो र उसको साथी त्यहि घरमा डेरागरि बस्ने युवतीसँग गफगर्दै हाँस्दैथिए । 'बदमाशहरु! केटि त देख्नै नहुने ए!' आँखातर्दै म हिँडे । आधा केजी कुखुराको मासु पोलिथिन ब्यागमा हलाउँदै म कोठामा आइपुग्दा सालोकेटो र उसको साथीसँग त्यहि आँगनकि युवती पनि चिया पिउँदैथिइन् ।
'हैन यो केटिको पनि के चाला हो? हामीसँग त कहिल्यै बोल्दिन पनि थिइ?' मनमा कुरा खेलाउँदै म पनि बसें चिया पिउँन । उनिहरुको चल्दाचल्दैको गफको माझमा श्रीमतीले त्यो युवतीको परिचय दिइन्, 'यि बैनि त हाम्रै गाउँले पो रैछन् । हामीले कहिल्यै बोलेनौं । भाइहरुसँगै पढेकि रे ।'
'ए हो र?' मैले यत्ति नै भनें ।
कुरा चलिरहँदा मैले आफु बसेको पलङ्गको सिह्रानमुनिबाट हजार हजारका नोटहरु चिहाईरहेको देखें । सम्झें, 'हिँजैसाँझ श्रीमतीलाई तलब बुझाएको थिएँ । उनले त्यहि पैसा त्यसरी जथाभावी राखिछन् ।'
पैसा तानेर गनें । सातसजार रहेछ । मलाई पुगिगयो । श्रीमतीको धतुरो झार्नपट्टि लागें, 'यो पैसा किन यसरी जथाभावी राखेको? घरमा को आउँछ को आउँदैन? हरायो भने के गर्छौ? अहिले आफ्नै मान्छेको पनि भर गर्ने जमाना छैन । पैसा जस्तो कुरो पनि यसरी कागजको चिर्कटो राखेजस्तो राख्ने हो? तिम्रो ढङ्ग कैले आउँछ?'
श्रीमती चुप रहिन् । उनको अनुहारमा अनौठो भाव देखा पर्दैथियो । मलाई त्यो उनले पैसा जथाभावी छोडेकोमा पश्चताप हो जस्तो लाग्यो । म अझै कराउनेवाला थिएँ । वातावरण असहज भैसकेको थियो । तिनै युवती उठिन् र 'दिदी अहिले म जान्छु है, कलेज जानुपर्छ' भन्दै बाहिर निस्किन् । भाइहरु पनि 'लौ दिदीभेना, खाना खान पछि फेरि आउँला अहिले लाग्छौं' भन्दै निस्किए ।
एकछिन कोठाको वातावरण ठुलो घण्ट बजेर रननन थर्किरहेझैं भयो र क्रमश शान्त हुँदै चकमन्नमा पुग्यो ।
'किन आ'रछन् त तिम्रा भाईहरु?' मैले सोधें ।
फुल्लिएकि श्रीमतीले एकछिन टकटकी लाएर मेरो अनुहार हेरिन् र भनिन्, 'हाम्रो भाइलाई पनि उसको साथीले इज्राएल लाने रे सँगै । केयर गिभरको काम गर्छ रे उ । राम्रो कमाई हुन्छ रे । आफु गफ गर्नुओर्नु होइन । खाली अरुलाई नराम्रो भन्न बाहेक आउँछ र तपाईंलाई?' उनि विचमा एकछिन केहि बेर रोकिइन् र पुन: ठुलो सास फेर्दै भनिन्, 'केहि कुरा तपाईंले सोचेजस्तो भएन भनेपनि एकछिन चुपलागेर पछि भन्न सक्नुहुन्न थियो? यो पैसा मलाई भाइको साथीले 'दिदीलाई भेट्न आउँदा खालीहात आएँ, यो पैसाले केहि किन्नुहोला' भनेर दिएको । तपाईंले चैं उनिहरुलाई नै चोर जस्तो ठान्नुभयो । ढङ्ग त मेरो हैन तपाईंको पो कहिले नआउने भयो बुझ्नुभो?'
Posted by दीपक जडित at 6:54 PM3comments: Links to this post